.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ဖြူဖြူကျော်သိန်း - မိန်းကလေးတစ်ယောက် အသည်းကွဲနေတယ်
ဖြူဖြူကျော်သိန်း - မိန်းကလေးတစ်ယောက် အသည်းကွဲနေတယ်
ဖြူဖြူကျော်သိန်း မိန်းကလေးတစ်ယောက် အသည်းကွဲနေသည် စီးရီးတစ်ခုလုံး တင်ပေးပါဗျာဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းရေ
ဒီနေ့တော့ တင်ပေးလိုက်ပါပြီနော်..။ လိုင်းကောင်းတဲ့အချိန်စောင့်ပြီး တင်နေရတဲ့အတွက် နည်းနည်းကြာသွားတယ်။
တစ်ခြား Mp3 သီချင်းတွေ တင်ပေးနေတဲ့ ဆိုဒ်တွေမှာတော့ တင်ထားကြတာရှိပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်တွေ အရမ်းကြီးနေလို့
YouTube ကနေ တစ်ပုဒ်ချင်းစီရှာပြီး ဒေါင်းလိုက်ရတယ်။ ပြီးတော့မှ 64kbps နဲ့ဆိုဒ် ပြန်ချုံ့ပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ။
အောက်မှာ တစ်ခါတည်း နားထောင်ဖို့ရော ဒေါင်းယူဖို့ပါ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ..။
1 ချယ်ရီလမ်း Click Here !! Click Here !! 2.20 MB
2 နောက်ဆုံးအချိန် Click Here !! Click Here !! 2.00 MB
3 သတိထားကြ Click Here !! Click Here !! 1.50 MB
4 ငှက်ကလေးလို Click Here !! Click Here !! 2.50 MB
5 မိန်းကလေးတစ်ယောက် အသဲကွဲနေတယ် Click Here !! Click Here !! 1.80 MB
6 ကြိုးပြတ်သူ Click Here !! Click Here !! 1.90 MB
7 အန္တရာယ် ကြောင်မလေး Click Here !! Click Here !! 2.10 MB
8 အရှုံးထက်ပိုသော Click Here !! Click Here !! 1.80 MB
9 ဘာဖြစ်ဖြစ် Click Here !! Click Here !! 1.60 MB
10 လှည့်စားလိုက် Click Here !! Click Here !! 2.00 MB
11 အားလုံးအတွက် Click Here !! Click Here !! 2.10 MB
Posted by Thurainlin at 10:01